दुईवटा ट्रक ठो’क्किँदा दुवै ट्रकका चालकको मृ’त्यु – Nepali Taja Khabar
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वीनवलपरासीको दुम्कौलीमा दुई वटा ट्रक आपसमा जुध्दा दुवै चालकको मृ त्यु भएको छ । दु र्घ ट नामा दुई जना घा इ ते भ ए का छन् ।ना६ख ३०११ र ना७ख ७०२३ नम्बरका ट्रक गएराति १२ बजे आपसमा ठो क्कि एका थिए ।
दु र्घ टनामा ३०११ नम्बरको ट्रक चालक पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने ५१ वर्षीय खिमबहादुर विक र ७०२३ नम्बरको ट्रक चालक मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका ३५ वर्षीय राजकुमार न्यौपानेको मृ त्यु भएको इलाका प्र ह री कार्यालय रजहरले जनाएको छ ।दुवै चालकको जिल्ला अस्पताल डण्डामा आज बिहान करिब तीन बजेतिर मृ त्यु भएको हो ।
दु र्घट नामा दुवै ट्रकका सहचालकहरु घा इते भएका छन् । घा इते हुनेमा तनहुँको बन्दीपुर बस्ने वर्ष १८ का विश्वास शाही र दाङको बबई-६ घर भएका सुन्दर खड्का भनिने घनश्याम खड्का छन् । उनीहरु दुवैको अवस्था गम्भीर रहेको र उपचार गर्न चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा पठाइएको रजहर प्रहरीले जनाएको छ ।
यो पनि पद्नुहोस;-कोमल ओलिको पि,डुलाको कुरा गर्ने रघुजीले अरुको त के के हेर्नु हुन्छ होला ? कोमल हाम्री चेली हुन भन्दै आयो यस्तो भिडियो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल वली नेकपा नेता रघुजी पन्त वि,रुद्ध अदालत जाने भएकी छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता पन्तले उनी लक्षित दिएको अभिव्यक्तिले चरित्र ह,त्या भएको जनाउँदै वली न्यायका लागि अदालत जाने भएकी हुन् ।
वलीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताएकी छन् । जिल्लाले सिफारिस गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेको उनले दाबी गरिन् । प्रदेश कमिटीले गरेको नाम सिफारिसलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेपछि सांसद बनेको उनले सुनाइन् ।
उनले भन्निन्,‘केपी ओलीले टपक्क टिपेर मलाई सांसद बनाउनुभएको होइन । अर्को कुरा केपी ओलीले सबै कार्यकर्तालाई माया नै गर्नुहुन्छ । त्यसमध्येको म पनि एउटा पर्छु।’ कोमल ओलीले ट्वीटरमार्फत पन्त नि,च भएको आ,रोप लगाएकी छन् । एक कार्यक्रममा नेता पन्तले पो,इला जान पाम भन्दै पि,डुला देखाएको भरमा सांसद भएको अभिव्यक्ती दिएका थिए ।
तीन सुन्दरी दिदिबहिनीहरु फोहोर टिपेरै आफू पालिन्छन् आमालाई पाल्छन् ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो )
अर्डर क्यान्सल गरेको भन्दै डेलीभरी ब्वाइले मु’क्का हा’नेपछी…
बेलुन जस्तै फु#ल्न थाल्यो छोरा, वास्त#विकता थाहा पाउँदा आमा-बुवा दुवै चकित !